Grumman G-73 Mallard FSX, P3D, ary FS2004 kalitao avo dia tsy fahita firy add-ons momba ny kalitao ho toy ny maimaim-poana, jereo ny sary eto ambany ho an'ny famaritana feno (namboarin'i FS mpankafy).
Ny Grumman G-73 Mallard dia fiaramanidina amphibia manana endrika kambana. Betsaka no novaina tamin'ny fanoloana ny motera radikal Pratt & Whitney Wasp H tany am-boalohany tamin'ny maotera turboprop maoderina. Vita tamin'ny 1946 ka hatramin'ny 1951, nifarana ny famokarana rehefa nampidirina ny SA-16 Albatross an'i Grumman lehibe kokoa.
Ny fanorenana ny fahombiazan'ny Goose sy Widgeon, Grumman Aircraft dia namolavola lehibe kokoa G-73 Mallard noho ny fampiasana ara-barotra. Mitazona ny ankamaroan'ny asan'ny fiaramanidina kely, toy ny kilaometatra kambana roa, elatra avo lelam-pandehanana, fitaovana fandefasana entana ary rambony mahitsy, ny orinasa namorona ny 59 Mallards teo anelanelan'ny 1946 sy 1951. Tsy sahala amin'ny fiaramanidina kely, ny môrdarka dia nanisy fiaramanidina telo heny, nanantitrantitra ny hoditra, kodiarana roa sy dingan'ny fiaramanidina. (Wikipédia)
Video ny fampahafantarana
Nohavaozina taminy 21 / 02 / 2018: Tsy misy fiovana momba ny FS2004 version ity vaovao ity. Vaovao FSX tompon-tany sy ny modely Prepar3D v4 mifanaraka amin'ny totalin'ny 15.
Lockheed Martin Prepar3D v1 hatramin'ny v5 ➕ Microsoft Flight Simulator X: Steam Edition ➕ Microsoft Flight Simulator X (All Version) ➕ Microsoft Flight Simulator 2004